🥇 ▷ Tronsmart Spunky Beat: faallooyinka ✅
Tronsmart Spunky Beat: faallooyinka
Tronsmart hadda waa dammaanad marka ay timaaddo madax-sare oo tayo leh oo ku habboon qiimaha, laakiin hadda taxanaha Spunky wuxuu qaaday tallaabo muhiim ah: halkan waa Tronsmart Spunky Beat, aan aragno sida ay ugu dhaqmaan dib u eegistayada!
taasi Tronsmart Spunky Beat Waxay ku soo galeen baakado caadi ah oo aan u adeegsan jirnay Tronsmart, oo leh sawirro midab leh hore iyo macluumaad dhabarka ah. Gudaha sanduuqa si fiican ayaa loo hayaa oo runti wuxuu ku soo noqdaa dareen tayo leh.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay xirmada waa mid caadi ah: marka lagu daro mashiinka dhegaha iyo sanaadiiqda wax lagu dallaco, waxaan helnaa fiilooyin aad u yar. Nooca USB-C iyo labadaba 3 waxay isku xiraan adaparka, si ay u daboolaan inta ugu badan cabirka atrium-ka. Waxa kale oo jira dammaanado iyo tilmaamo deg deg ah, nasiib wanaag sidoo kale Talyaani dhexdeeda.
Moodeliska: Tronsmart Spunky Beat
Kala duwanaanshaha ficilka: 10m
Waxyaabaha: PC + ABS caag ah
Cancellation Noise: CVC 8.0
Battery / Powerbank: 350 mAh
Waqtiga: 7 saac
Dareenka ugu horreeya ee aad dareento markaad cabto Tronsmart Spunky Beat Dabcan, xooggoodii, oo ay weheliso jilicsanaan aan caadi ahayn, ayaa ka dhigaya madax-weyneyaashan inay aad ugu farxaan in la isticmaalo. Waxaa lagu heli karaa oo keliya madow gloss madow (dhegaha dhagaha iyo kiisaska, kan dambe oo leh dhameystir gloss), waxay si fiican ugu qaabeysan yihiin dhammaan noocyada dhegaha, xitaa haddii ay jiraan dad doorbida naqshad dheer.
Mashiinka dhagaha, marka la gashado, waxay si fiican ula qabsan doonaan dhegta, iyagoo maamuli doona inay qabtaan xitaa markay socdaan ama tababarku socdo.
Laydhka cas ee cas-cas wuxuu ku yaal labada maqal-dhegaha, oo muujinaya heerka dallacaadda, iyo LED-yada wareegsan ee isla midab ah, oo tilmaamaya ku xirnaanta aaladda. Beat Spunky waxaa loogu talagalay isticmaalka isboorti: tayo tayo sare leh iyo Shahaadada IPX5 Waxay kuu oggolaaneysaa inaad u isticmaasho dhammaan nashaadaadyada adigoon wax walwal ah qabin, maxaa yeelay waxay u adkaystaan ​​dhididka, kala-baxa iyo roobka.
Isla sidaas oo kale ayaa lagu dabaqayaa sanduuqa buuxinta, oo leh 4 heerka LEDs si loo muujiyo heerka dib u buuxinta. Runtii waan ka mahadcelinayaa qaabeynta gudaha ee kiiska, oo si taxaddar leh u haysa makiinadaha dhagaha la ‘, iyadoo aan suurtagal ahayn inay gudaha u socdaan. Lakabka sare waa matte wax yar oo caag ahna waa panacea markay gacmahaagu qoyan yihiin, halka suunka maqaarka ah ee isku-darka ah ay aad waxtar u leedahay in laga soo qaado sanduuqyada ama boorsooyinka jeebka, ama laga soo laalaado shandada dhabarka.
Waa fikrad wanaagsan in la geliyo fiilo USB USB mini ah santuuqa hoose ee xamuulka, kaas oo aad u habboon oo aan gabi ahaanba weynayn.
Sababtoo ah Tronsmart waa ay yaqaanaan, mugga ugu badan ayaa aad u sarreeya marka la barbar dhigo badeecadaha kale ee isla qeybta ah. Thanks to technology Qualcomm DSP iyo CVC 8.0, wada shaqeyn, dhawaaqa dibedda ayaa gebi ahaanba la baabi’in doonaa.
Awoodda taleefannadaas dhagaha waa, shaki la’aan, qoto dheerida aan caadiga ahayn ee baastada, hadda waa astaan ​​ganacsi oo loo yaqaan ‘Tronsmart’, oo ay weheliso isku-dheelitirnaan wanaagsan ee dhexda iyo muruqyada sare waxay soo saartaa cod hodan ah, dhex-dhexaad ah iyo marwalba wacan.
Tayada codka ayaa runtii wanaagsan, walina wali waa heer aad u sareeya – Ma helin wax dhagar ah ama khasaaro tayo leh oo leh adeegyo wareegaya sida YouTube ama Spotify ama qaab ahaan flacSi buuxda u waafaqay. Dhageysiga fiidiyowyada aaladaha sida Netflix sidoo kale waa wax aad u xiiso badan oo had iyo jeer heerar sare ah. Cod maqalka iyo makarafoonkuba way wanaagsan yihiin inta lagu jiro wicitaanada.
Waxaan kaaga mahad celinayaa Qualcomm QCC3020 chip, aptX, AAC, SBC ayaa iyagana la taageerayaa.
Labadaas nin Beat Spunky Qalabka wuxuu qaadan doonaa dhowr ilbiriqsi ka dib rakibida ugu horeysa waxay si toos ah ugu xirmi doonaan ka dib markii ay ka saaraan santuuqa gudaha. 1 sekan ogeysiinta ayaa kugu soo wargalin doonta xiriir guul leh, sidoo kale waxay ku siin doontaa macluumaad ku saabsan heerka baytariga.
Qalabka dhagaha ee ‘TWS y’ waxaa loo isticmaali karaa 10m oo radius ah oo qalabka kuxiran, maaddaama aysan jirin carqalado badan. Dhagta weyn ee dhagaha waa bidixda, oo aad si badbaado leh u adeegsan karto.
Nolosha batteriga waxay si buuxda u muujineysaa ballanqaadyada, waxayna u baahan tahay 5 daqiiqo oo keliya si ay dib isugu buuxiso inta lagu guda jiro Spunky Beat 1 saacadood ee isticmaalka
Kontaroolada taabashada ayaa sidoo kale ku yaal dash, labada dhegoodba: hal, labalaab, saddexjibbaar iyo taabasho joogto ah, si loo fuliyo dhammaan howlaha lagama maarmaanka ah, sida dhaqaajinta kaaliyayaasha codka, ka jawaabida iyo soo gabagabaynta wicitaanka, beddelashada heesaha iyo dhexgalka mugga.
taasi Tronsmart Spunky Beat Iyaga oo matalaya isbeddelka dabiiciga ah ee taxanaha Spunky, oo hadda ah bartilmaameedka xajmiga, waxay ku guuleysteen inay helaan “wax dheeri ah” oo ay ugu mahadcelinayaan jiritaanka darajada “Qualcomm chip”, hoos u dhac weyn oo ku yimid dhawaqa firfircoon iyo tayada maqalka oo ka sarreysa celcelis ahaan. .
Waad iibsan kartaa Tronsmart Spunky Beat ee GeekBuying.com iyadoo laga dhimayo € 27.